di Davide Sabbatini - November 7, 2021
Nke a bụ azịza anọ nke Akwụkwọ Nsọ maka iyi ọha egwu ma ọ bụodio nke mere ka Onye Kraịst dị iche na ndị ọzọ.
Kpee ekpere maka ndị iro gị
Iso Christianityzọ Kraịst bụ nanị okpukpe na-ekpe ekpere maka ndị na-efe ya. Jizọs kwuru, sị: “Nna, gbaghara ha, n'ihi na ha amataghị ihe ha na-eme” ( Luk 23:34 ) Dị nnọọ ka ha nọ na-akpọgide ya n’obe ma na-egbu ya. Ọ bụ ụzọ dị mma isi zaghachi ịkpọasị ma ọ bụ iyi ọha egwu. “Na-ekpe ekpere maka ha, n’ihi na ọ bụrụ na ha echegharịghị, ha ga-ala n’iyi” (Luk 13:3; Mkpu 20:12-15).
Gozie ndi nākọcha unu
Anyị na-enwe mmasị ịrịọ maka ngozi Chineke n'isi ndị mmadụ, karịsịa na ekele anyị na nke ahụ bụ ihe dị mma. Ma ị maara na ọ bụ Akwụkwọ Nsọ ịrịọ maka ngọzi Chineke n'isi ndị na-akọcha gị? Jizọs gwara anyị ka anyị "gọzie ndi nākọcha unu, kperenu ndi nākpọ unu ujọ(Luk 6:28). O yiri nnọọ ike ime, ma ọ bụ a Akwụkwọ Nsọ nzaghachi ịkpọasị na iyi ọha egwu. Otu onye iwe ji ekweghị na Chineke gwara m, sị: “Akpọrọ m gị asị” m wee zaa ya, “Enyi m, Chineke gọzie gị nke ukwuu.” Ọ maghị ihe ọ ga-ekwu ọzọ. Achọrọ m ịrịọ Chineke ka ọ gọzie ya? Mba, mana ọ bụ ụzọ azịza nke Akwụkwọ Nsọ. Jizọs ọ̀ chọrọ ịga n'obe? Mba, Jizọs kpere ekpere ugboro abụọ ka e wepụ iko ilu ahụ (Luk 22:42 ma ọ ma na azịza Akwụkwọ Nsọ bụ ịga Calvary n'ihi na Jizọs ma na ọ bụ uche Nna. Nke a bụkwa uche Nna maka anyị.
Mere ndị kpọrọ gị asị ihe ọma
Ọzọkwa, Jizọs dokwasịrị mmanya ahụ elu nke ukwuu, na-asị: “Ma ana m asị unu ndị na-ege ntị: hụ ndị iro gị n'anya, meere ndị kpọrọ gị asị ihe ọma(Luk 6:27). Lee ka o si sie ike! Were ya na mmadụ mere gị ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe i nwere; wee zaghachi n'aka nke ya site n'imere ha ihe ọma. Ma nke a bụ kpọmkwem ihe Jizọs gwara anyị ka anyị mee. “Mgbe iwe were ya, ọ lọghachighị iwe; mgbe ọ tara ahụhụ, ọ dịghị egwu, kama ọ nọgidere na-enyefe onwe ya n'aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi "(1 Pt 2,23:100). Anyị kwesịkwara ịdabere na Chineke n'ihi na ọ ga-abụ XNUMX% ziri ezi.
N’ịlaghachi na Luk 6:27, Jizọs kwuru, sị: “Hụ ndị iro gị n'anya", Nke ga-agbagwoju anya ndị kpọrọ gị asị na ndị na-ebuso ndị na-eyi ọha egwu egwu. Mgbe ndị na-eyi ọha egwu hụrụ ka Ndị Kraịst ji ịhụnanya na ekpere zaghachi, ha apụghị ịghọta ya, ma Jizọs na-ekwu, sị: "Na-ahụnụ ndị iro unu n'anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu" (Mt 5,44:XNUMX). N’ihi ya, anyị kwesịrị ịhụ ndị iro anyị n’anya ma na-ekpe ekpere maka ndị na-akpagbu anyị. Ị nwere ike iche ụzọ ka mma ịzaghachi iyi ọha egwu na ndị kpọrọ anyị asị?
Ntụgharị asụsụ post a na Faithinthenews.com